सांसदहरूसँग ओली – अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको हो, प्रधानमन्त्रीबाट मलाई हटाएको होइन !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकट सांसदहरूलाई सरकार नफेरिनेमा 'ढुक्क' हुन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रवार बिहानैदेखि आफूनिकट सांसदहरूलाई ओलीले बालुवाटार डाकेका थिए ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूलाई अदालतले प्रधानमन्त्री छोड भनेर आदेश नदिएको बताए । सर्वोच्चले संसद मात्र पुनःस्थापना गरिदिएको तर प्रधानमन्त्रीको कुर्ची नखोसेको उनको तर्क थियो ।
छलफलमा सहभागी एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले बाहिर नैतिकताको प्रश्न उठेको छ भनेर भन्दा प्रधानमन्त्रीले अदालतले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ र भन्दै मलाई उल्टो प्रश्न गर्नुभयो ।'
ओलीले राजीनामा आफ्नो शब्दकोशमा नरहेकोसमेत बताएका थिए । 'मलाई हटाउन खोजे मैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, राजनीतिक धर्म यही हो,' ओलीको भनाइ थियो ।
'कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न, राजीनामा मेरो शब्दकोषमा छैन । यतिबेला राजीनामा दिनु भनेको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, यही सरकार निरन्तर चलिरहन्छ,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै बालुवाटार छलफलमा सहभागी ती सांसदले लोकान्तरसँग भने ।
शुक्रवार बिहानैदेखि बालुवाटारमा सांसदहरूको आउजाउ बाक्लो थियो । ओलीले काठमाडौँमा उपलब्ध भएका सबै प्रदेशका सांसदहरूसँग सामूहिक र एक्लाएक्लै भलाकुसारी गरेका थिए ।
सांसदहरूसँग कुरा गर्दा ओलीले मुख्यतः तीन विषयमा जोड दिएका थिए । पहिलो हो संसद बैठक छिटै आह्वान गर्ने । दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव आएमा संसद फेस गर्ने । तेस्रो कुनै पनि हालतमा अर्को सरकार बनाउन नदिने ।
ओलीले यसबाहेक प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति पनि बनाएका छन् ।
'तपाईहरूले पनि मेहेनेत गर्नुस्, उता रहेका साथीहरूलाई यता ल्याउनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हामी नै हौँ,' ओलीले सांसदहरूसँग भनेका थिए ।
ओलीले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको नेकपाको आधिकारिकता विवाद हल नहुने बेलासम्म आफूलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने बताएका छन् ।
ओलीले भने, 'दल विभाजन भइहाल्यो भने बल्ल बहुमतको सरकार बन्ने दिशातर्फ देश अघि जाला, त्यसअघि म हट्नुपर्ने कुनै कारण छैन । म आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुन चाहन्न ।'
विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले छलफल गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूलाई भने ओलीले होटेल याक एण्ड यतिमै पुगेर ब्रिफिङ गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले संसद पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलापछि राजीनामा नदिएपछि बाहिर नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै ओली कड्किए, 'के हो यो नैतिकता भनेको ? अदालतले संविधानको व्याख्या गरिदियो, त्यो ठीक छ । मैले गर्ने राजनीतिक निर्णय हो । मैले कुर्ची छाड्दैमा राजनीतिक निकास निस्केला भन्ने ठान्नुभएको छ भने त्यो गलत हो ।'
ओलीले नेकपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।
केही दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउने संकेत गरेका छन् ।
ओली पक्षीय सांसद नारदमुनी रानाले लोकान्तरसँग भने, 'अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने, संसद बैठक आह्वान गर्ने र त्यो भन्दा अगाडि संसदीय दलको बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको हो ।'
मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्णप्रसाद दाहालले भने आफूहरूलाई शनिवार बोलाइएको जानकारी दिए ।
'आज अन्य सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको रहेछ,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'हामीलाई भने भोलि बोलाउनु भएको छ ।'
दाहालले पार्टी एकताका बारेमा कुरा राख्ने आफ्नो तयारी रहेको बताए ।
नेकपामा अहिले ८० को हाराहारीमा सांसदहरू ओलीतर्फ देखिएका छन् । यतिले संसदीय दलमा ओलीको बहुमत पुग्दैन । त्यसैले ओलीले आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदलाई एकढिक्का राख्ने र प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदलाई फकाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् ।
महन्थले राजेन्द्र महतोलाई दिए बधाई
ओली र नेपालबीच भोलि फेरि बैठक बस्दै
राजनीति थप गिजोलियो– उपेन्द्र यादव
योगेशले दिए नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई